Ski fialantsasatra " Journey-Assist - Asa atao amin'ny ririnina
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Skiing Alpine
Ski filomanosana, snowboard, oramiana
Raha mpankafy hetsika ivelan'ny any ivelany ianao, ny toerana mahafinaritra ny tendrombohitra, rivotra madio, ary liana amin'ny loharano adrenalinina tsy misy fetra ianao, fialan-tsasatra fialan-tsasatra izao no ilainao!
Ny fitaovana izay tena ilaina indrindra amin'ity kofehy ity, mazava ho azy tendrombohitra ski и Snowboard.
Nandritra ny valo-polo taona, amin'ny fialan-tsasatra amin'ny ski, dia lasa iray amin'ireo karazana fihetsiketsehana ankafizin'ny olona indrindra ho an'ny olona marobe. Izao dia efa namboarina ho orinasa indostrian'ny ski feno, izay manana toerana lehibe eo amin'ny toekaren'ny firenena maro.
Azo antoka fa manaitra ny fotodrafitr'asa fialan-tsasatra maoderina. Ireo dia làlan-kaleha ho an'ny ski an-tsambo sy ny snowboard. Fananganana ski sy fialamboly, zaridaina Snowboard. Làlan'ny ski fisaka. Hotely, kaleta, trano. Fanofana ara-panatanjahan-tena. Ivotoerana fitsaboana sy fisorohana. Kafe sy trano fisakafoanana. Ary mazava ho azy, orinasa ho an'ny fialamboly feno (sinema, ivon-toerana lalao, filalaovana baolina sy ny hafa).
Mazava ho azy fa tokony hanomboka ny olom-pantatrao amin'ny fialantsasatra ski amin'ny safidin'ny safidy mety araka ny fahaizanao. Raha vao nanomboka nanao ski ianao ary te hanandrana fotsiny, dia angamba tokony hiara-miasa amin'ny mpampianatra ianao aloha, ary avy eo mankany anaty ady :).
Ski fivarotana miaraka amina lalana mora
Sarikamis (Sarikamis) - vorontsiloza.
9 lalana. 3 fiandrasana.
Tsara ho an'ny fialantsasatra fianakaviana.
Tsy misy ny lalana ho an'ny mandroso.
Misy làlam-pandehanana amin'ny làlan-tsambo
Misy sekoly sekoly ski
Toerana ofisialin'ny toeram-pialofana - fitenadio.com
Pamporovo (Pamporovo) -Bolgaria.
13 mandeha. 18 lif.
Foibem-panatanjahantena sy fialamboly.
Safidy marobe amin'ny hotely.
Website ofisialy ofisialy ny Resort -bulgariaski.com
Salen (Selenioma) - Soeda.
Ny faritra ski lehibe indrindra any Scandinavia.
Manambatra trano fandraisam-bahiny efatra.
158 no mandeha.
Lalana ho an'ny sela fanelanelanana sy vaovao.
Website ofisialy ofisialy ny Resort - salenfjallen.se
Raha azonao antoka fa hianatra ao anatin'ny andro roa ianao, ary ny mitaingina amin'ireo renibeny dia tsy manome aingam-panahy anao, dia afaka mitady hotely misy ahitàna ianao lalana tsotra ary sarotra kokoa. Ohatra:
Ny trano fandraisam-bahiny rehetra Andorra manana làlana ho an'ny fiofanana samihafa.
Bansko (Bansko) - Bolgaria.
Misy ny lalana ho an'ny ambaratonga fototra sy ny elanelan-taona.
15 mandeha. 13 lif.
Feno olona. Filaharana.
Toerana ofisialin'ny toeram-pialofana - bulgariaski.com, handova.ru
Webcam Resort - original.livestream.com/bansko
Les Arcs - Frantsa.
Ny toerana malaza indrindra any Frantsa.
Safidy fisafidianana be dia be amin'ny sehatra rehetra.
106 lalana. 54 fiandrasana.
Misy fotoana azo omena freeride.
Amin'ny fahavaratra, ny làlan'ny bisikilety an-tendrombohitra dia azo.
Toerana ofisialin'ny toeram-pialofana -lesarcs.com, fiveloma.fr
Webcam Resort - ski-lesarcs.com
Afaka mikaroka ireo mpanao ski manana traikefa adrenaline in resorts:
Andermatt (Andermatt) - Soisa.
23 dian-tany. 16 fiakatra.
Lalana ho an'ny skis flat. Snowshoe track. Fiaran-tongotra.
Fivoarana fotodrafitrasa ..
Toerana ofisialin'ny toeram-pialofana -andermatt.ch
Webcam Resort - andermatt.ch
Lalam-by mitondra terrain sarotra.
Nifantoka bebe kokoa tamin'ny haavo pro.
Faritra Ski Marmolada Glacier
S lomotra amin'ny alina
Toerana ofisialin'ny toeram-pialofana - arabba.it
Chamonix (Chamonix) - Frantsa.
66 mandeha. 50 lif.
Miakatra tendrombohitra. Rock miakatra.
Hekitara 3000 mahery mahery natao hanaovana fialamboly amin'ny ririnina.
Toerana ofisialin'ny toeram-pialofana - chamonix.net
Webcam Resort - chamonix.net/english/webcams
Ski fialantsasatra any Aotrisy
Ary i Austria dia iray amin'ireo firenena mety indrindra amin'ny fialantsasatra ski matihanina. Misy izany rehetra izany: trano fandraisam-bahiny misy kalitao sy miovaova, "après-ski" mandroso tsara (amin'ity Austria ity dia miharihary mialoha mialoha ireo firenena eropeana hafa), tehezan-damba voadio tsara (ny tsara indrindra amin'ny Alps rehetra). Ambonin'izany, ny ankamaroan'ireo tehezan-tendrombohitra ireo dia tsy "hafanana" velively: mila fahaizana tsara ny fanaovana ski eto. Ary koa any Aotrisy dia misy glacier marobe mamela anao hitondra amin'ny toetrandro rehetra.
Ho an'ireo izay mifankafantatra amin'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny Ski Vaovao dia manolotra anao izahay Ny trano fandraisam-bahiny 15 malaza indrindra any Amerika.
Ny toerana fanaovana ski ambony indrindra any Amerika
Killington Ski Resort - Vermont.
Ny toeram-pialofana lehibe indrindra amin'ny morontsiraka atsinanana. Dian-tongotra 155 miaraka amin'ny halavany 140 km. Tampon-tendrombohitra 7. 21 fampiakarana. Valan-javaboary fanatanjahan-tena ho an'ny mpanao snowboard.
Alta Ski Resort - Utah.
Iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny malaza sy tranainy indrindra any Amerika. Natao hentitra amin'ny fanaovana ski mikorisa. Tsy avela eto ny mpanao snowboard. Ranomandry maina voajanahary mahafinaritra.
Ao amin'ny zaridainam-pirenena lehibe indrindra any Etazonia. Indroa io no nampiantrano ny Lalao Olaimpika. Ampiasaina amin'ny fampiofanana atleta koa izy io. Ny fepetra tonga lafatra dia tazomina mandritra ny taona. 86trass. Eo koa ny hazakazaka an-tanety misy hazakazaka 50km, faritra misy ranomandry sy sodina hafa.
Resort Ski any an-danitra - Kalifornia.
Iray amin'ireo resy tendrombohitra avo indrindra any Etazonia. Fotodrafitrasa lehibe. 90 track. 30 fiakatra. Faritra mahafinaritra amin'ny farihy Lake Tahoe sy ny Tany Nevada misokatra amin'ny alehany.
Ny trano fanta-daza malaza indrindra amin'ny World New. 200 ny ambaratonga fahasarotana isan-karazany. Free ski bass. Eritrereto tsara ny foto-drafitrasa.
Fihaonambe maoderina elit. Manam-by lalantsara asfalta ary escalator an-kalamanjana. :). Sekoly fandraisam-bahiny, ski ary snowboard. Nahazo mari-pankasitrahana marobe noho ilay serivisy avo lenta ny toeram-pialofana.
rehefa avy mitambatra any amin'ilay toerana fivarotana Canuons tamin'ny 2015, lasa toerana fialan-tsasatra lehibe indrindra any Amerika. Lalana 300. Fampiakarana 38. Valan-javaboary 7 ho an'ireo mpanao snowboard. Tamin'ny 2002 dia nampiantrano ny Lalao Olaimpika izy.
Telluride Ski Resort - Colorado.
Any amin'ny faritra ambony indrindra ao Etazonia. Miseho amin'ny fomba mahafinaritra tsara tarehy avy amin'ny alehany. Amin'ny ambaratonga fahaiza-manao rehetra dia misy ny làlambe.
Vail Ski Resort - Colorado.
Ny toerana faharoa lehibe indrindra any Etazonia. Iray amin'ireo fivezivezivezy ski dimy tsara indrindra eran'izao tontolo izao izy io.Mihoatran'ny roa arivo hekitara ny arak'akanjo fahaiza-manao rehetra. Misy valan-javaboary ho an'ny snowboarders, faritra be bobsled ary trek an'ny ski misy firenena.
Iray amin'ireo fivarotana tranainy indrindra amin'ny morontsiraka atsinanana. Rivotra tery tery nampidirina namaky ny ala. 116 track. 13 Fiara.
Keуstone Ski Area- Colorado.
Mety amin'ny sehatra fampiofanana rehetra. Izy io dia malaza amin'ny rafi-jiro marevaka amin'ny filàvan'ny alina.
Ny malaza indrindra ao amin'ny firenena. Fisandratana avo indrindra any Amerika (3910m). 152 lalana. 29 mampiakatra. Valan-javaboary 5 ho an'ny snowboard. sekolin'ny ski.
Jackson Hole Ski Resort - Wyoming.
Fialantsasatra mahaliana. Malaza amin'ny toetrandro voatahiry ao amin'ny Wild West. Trano hazo maro be tamin'ny taonjato lasa talohan'io. Fahamaroan'ny saloons miasa. Lalana 116. Antsasaky ny matihanina. antsasaky ny vao manomboka.
Làlam-pamatrarana 105 no nokendrena tamin'ny matihanina sy ho fanatanjahantena mandroso. Ny lalana lava indrindra dia 5400m.
Toeram-pialan-tsasatra izay voafidy ho toeram-pialan-tsasatra mendrika indrindra any Etazonia nandritra ny dimy taona nisesy. Ho an'ny mpanao ski ihany. Lalana 101. Hotely sy hotely fisakafoanana elite. Eken'ny maro ho toeram-pialan-tsasatra tsara indrindra amin'ny resaka serivisy, fialamboly ary fikojakojana ny làlana.
Raha manapa-kevitra fotsiny ianao hoe io no karazana fialan-tsasatrao na tsia, dia mazava ho azy fa mety tsy dia misy dikany loatra ny fampiasam-bola amin'ireo fitaovana tsara indrindra :). Amin'ny dingana fampidirana dia azonao atao tanteraka ny manao pataloha tsy misy rano sy palitao midina izay tsy manakana ny fivezivezena. Mazava ho azy fa mila fonon-tànana sy balaclava (sarontava) ianao. atin`akanjo mafana dia tsy ho be loatra. Azonao atao ny manisy akanjo ba volonondry na turona na volon-koditra malefaka. Tamin'ny voalohany, mamporisika ny hanofa ny fitaovana mihitsy izahay. Farafaharatsiny farafaharatsiny, hanampy anao hisafidy iray mifanaraka amin'ny halavany sy ny lanjanao ianao. Na, raha tianao ny anao manokana, dia afaka mitady fitaovana avy amin'ny tahiry taloha amidy ianao. Azo antoka fa mora kokoa noho ny fironana izy io.
Ny toetrandro amin'ireo trano fandraisam-bahiny eoropeana dia afaka manao akanjo mora foana. Ny tena takiana dia ny hoe ny akanjo tsy manery ny fihetsiketsehana, fa miaraka amin'izay kosa, raha tery, dia tsy maintsy mihidy foana ny kibo sy ny lamosina ambany, ary koa ny lobaka palitao dia tsy maintsy misy cuffs raha tsy te hiafara amin'ny palitao feno ranomandry :).
Torohevitra avy amin'ny matihanina amin'ny ski
Ny zava-dehibe indrindra dia ny injeniera momba ny fiarovana. Amin'ity tranga ity, toy ny mitondra fiara dia mila mitandrina ny tenanao sy ireo mpandray anjara hafa amin'ny hetsika oram-panala :).
Tohizo ny halaviran-tananao.
Aza mijanona eo amin'ny làlan-jotra amin'ny faritra maty (izay tsy hita no jerena).
Raha vao manomboka ianao, ny tetika tsara indrindra dia ny hidina miadana fa azo antoka. Tsy misy fihetsehana tampoka.
Mianara milatsaka! Ity no fahaiza-manao voalohany sy lehibe indrindra :). Tsy vitanao raha tsy misy latsaka. Raha mahatsapa ianao fa tsy mahafehy ny fianjeranao, manondroa lohalika araka izay tratra, manindry ny lamosinao amin'ny tany. (miankohoka, raha mitranga).
Raha lavo dia tsara kokoa ny mianjera, fa tsy miverina.
Fidio ny orinasanao araka ny fahaizanao, mba tsy hijanona eo amin'ny tehezan-jaza any ambadiky ny fanirery irery.
Aza misalasala mandray lesona vitsivitsy avy amin'ny mpampianatra. Mazava ho azy fa afaka mianatra ny zava-drehetra ianao, fa ho lava kokoa izany.
Ho an'ireo izay variana amin'ny filokana ski, dia manana fotoana hanandrana ny tanany ihany ny toerana fanaovana ski snowboarding! Ity fanatanjahantena mahafinaritra ity izay mahavita manome fahatsapana mahazaka taonany :).
Raha mila snowboarding dia mila fitaovana feno ianao:
Helita sy solomaso
Ny foto-kevitra dia mbola mitovy amin'ny ski. Atombohy amin'ny lesona avy amin'ny mpampianatra iray. Tsy maintsy manomboka fiofanana amin'ny fomba mitovy amin'ny tranga fanaovana ski ianao, miaraka amin'ny fianjerany;).
Torohevitra vitsivitsy ho an'ireo vao manomboka amin'ny fisafidianana ny snowboard:
Rehefa misafidy zana-birao, mifantoha amin'ny lanjanao sy ny halavanao. Ny mpanamboatra dia tsy maintsy manondro ny haben'ny lanja sy ny habe mifanaraka amin'ny birao. Ho an'ny olona mavesatra dia ho lava kokoa ny birao. Mila azonao ny fifandraisana antony. Raha tsy kely ny habeny, dia mitarika eo ambanin'ny oram-panala, raha lehibe, dia ho sarotra ny hitantana azy.
Ny sakan'ny solaitrabe amin'ny faritra miraikitra, ampifanaraho amin'ny haben'ny kiraronao. Ny baoty dia tsy tokony hipoitra mihoatra ny 1-2cm mihoatra ny sisin'ny felam-panala.
Ny snowboard maoderina dia tonga amin'ny karazany maro amin'ny karazana snowboarding isan-karazany. Ireo vao manomboka dia asaina manomboka amin'ny tabilao allmountain na freestilefreeride. Izy ireo dia mety amin'ny zaridaina sy ny tendrombohitra.
Ny birao dia miovaova ny rafitry ny vatany Ho an'ireo mpanomboka, soso-kevitra malefaka sy malemy dia tsara no ampiasaina. Avelan'izy ireo hanao snower kely kokoa ny fihodinana sy ny fifehezana azy ireo tsara kokoa.
Akanjo ho an'ny snowboard
Tena zava-dehibe ny fisafidianana ny akanjo mety. Akanjo mifono vy vita amin'ny lamba vita amin'ny membrane misy ravina glued.
Ny palitao dia tokony afaka mifikitra amin'ny pataloha. Na ampiasao mitsambikina (any amin'ny trano tsy mahasalama, fa azo ampiharina rehefa eny ambony sambo)
Ny palitao palitao dia tsy maintsy ampidirina amin'ny fonon-tànana, tsy mamela ny ranomandry hiditra ao.
Eo ambanin'ny palitao palitao sy / na eny amin'ny lamosina dia tokony hisy zipelinan'ny rivotra.
Aza hadino ny mampiasa fiarovana - palitao manokana na akanjo itondra eo ambanin'ny akanjo ivelany.
Ny fiarovana tsara vita amin'ny teknolojia D3O dia fiarovana malefaka manjelanjelatra, izay lasa henjana rehefa voadona ary miaro azy tsy ratsy kokoa noho ny plastika. Ankoatra izany, ny fiarovana toy izany dia tsy misy famerana ny hetsika, ary izany no iray amin'ireo antony manan-danja indrindra amin'ny fisafidianana azy.
Ianao koa dia mila - fiarovan-tratra fohy fiarovan-doha, kambana lohalika ary fiarovan-doha.
Aza hadino ny momba ny takelaka fiarovana amin'ny fonon-tanana.
Fitaratra na saron-tava. Aretina miaraka amin'ny fitaratra roa (manakana fogo).
Booty malefaka. azo antoka fa amin'ny habeny. Ny kiraro vita amin'ny hoditra dia tsy faniry, satria mando izy ary, vokatr'izany, dia mihabetsaka. Fanampin'izay, mihasimba izy rehefa mandeha ny fotoana.
Baoty snowboard manokana, miaraka amin'ny baoty anatiny thermoformed.
Fiomanana amin'ny snowboard
Mila miomana amin'ny snowboard ianao. Fanatanjahantena sarotra sy manahirana. Tsy ho lany andro amin'ny mialoha ny handehanana amin'ny gym, toy ny trampoline. Na misy fiofanana fanazaran-tena hafa.
Custom, ny snowboard dia mitovy amin'ny skateboard, ary raha nisy izany tamin'ny fiainanao, dia diniho fa efa hainao ny antsasaky ny snowboard.
Alohan'ny hidiranao ny tabilao dia aza adino ny mamaivay. Ny mafana na 10 minitra ary ny fihanaky ny ratra dia mety ho baikoan'ny fahalalahana ambany kokoa.
Ilaina ny fanatanterahana fiofanana snowboard eo ambany fanaraha-maso. Tsy amin'ny fanirery irery amin'ny toerana tsy dia misy mponina.
Hahomby ianao! :).
Ny fahafahan'ireo toeram-pialan-tsasatra dia tsy nifarana teo, ary mbola afaka mampifaly anao amin'ny alàlan'ny lanezy, ny fiakarana an-tendrombohitra, ny fantson-drano, ary maro hafa koa izy ireo.
Ho an'ireo tia fitsangatsangana amin'ny lanezy. Namboarina tamin'ny fandehanana amin'ny lanezy. Avela hampiasaina amin'ny faritra mando na faritra misy ranomandry. Voazarazara amin'ny fampiharana:
Ny snowshoes no fitaovana voalohany namboarin'ny olona handeha amin'ny lanezy. Ampiasaina mavitrika izy ireo ankehitriny. Izy ireo dia azo ampiasaina ho fitaovana fanampiana (ohatra, ampiasain'ny snowboarders sy mpanao ski izy ireo - freeriders, mitaingina snowshoes amin'ny fiantombohan'ny razambe), na ho fomba iray manokana handaniana fotoana mahaliana. Fialamboly ekipa (geowshoe snowshoe) na fitsangatsanganana amin'ny alina amin'ny fanilo.
Ireo snowsho maoderina dia fitaovana teknolojia avo lenta miaraka amin'ny fiasana marobe isan-karazany (sponjy, saka, fametahana ny ombelahin-tongony ho an'ny razana mihena, fetran'ny mampihena ny ombelahin-tongony amin'ny fandehanana miakatra sy be lavitra kokoa) namboarina tamin'ny karazan-tany maro, na ranomandry matevina, na ranomandry matevina, na swampy ny tany.
Snowshoeing dia fitaovana iray izay mendrika hanintona ny mason'ireo tia mandroso amin'ny karazana fialam-boly amin'ny fialantsasatra :).
Fiara manaraka ny lanezy sy ny ranomandry. Tena afaka manome anao fihetseham-po tsy hay hadinoina sy fahatsapana tafahoatra izy io. koa, ny snowmobile dia fotoana mety hitsidihana ireo toerana any an-tendrombohitra izay ahafahanao mankany ihany.
Snowmobiles toy ny niniana natao natao haka ilay fientanentanana. Na dia tany am-boalohany aza io fiara maro an'isa io dia noforonina hanatontosana ireo asa tsy misy fialamboly manokana. Ary mandraka ankehitriny, any amin'ny faritra sasany amin'ny planeta, dia ampiasaina ny tena oram-panala (snowmobiles) fa tsy misy safidy hafa.
Ny oram-panala maoderina dia manana ny fahaizana miavaka. Mianika haingana sy haingana hianika ny havoana tsy mihena izy ireo, afaka manafaingana ao amin'ny 12-150km / h ao anatin'ny 10 segondra, afaka miasa toy ny asam-pandeha izy ireo ary mitondra vesatra hatramin'ny 1 taon. Mahatsiaro salama tsara ny ranomandry sy ny ranomandry ary ny tanin'ny virjiny, ary ny taninketsa ary eny amin'ny aspalta.
Avy amin'izany dia azontsika an-tsaina fa ny mety hisehoan'ny oram-panala mandehanan'ny ranomandry amin'ny alàlan'ny fialamboly tafahoatra dia avo tokoa :).
Ny trano fandraisam-bahiny ski misy lafo indrindra any Eropa (2018)
Madonna di Campiglio - Italia (salanisan'ny vidim-piainana - 677 euro / andro)
Ischgl - Aotrisy (salanisan'ny vidim-piainana - 583 euro / andro)
Saalbach-Hinterglemm - Aotrisy (salanisan'ny vidim-piainana - 436 euro / andro)
Ny trano fandraisam-bahiny ski mora indrindra any Eropa
Bansko - Bolgaria
Sochi - Rosia
Lahatsary mahasoa Tutorials.
Làlan-dàlambe ski ski
Ohatrinona ny fisakafoanana amin'ny ski any Etazonia (2018)
TOKO 10 amin'ireo trano fivarotana ski tsara indrindra any Rosia
Ski resort Bansko, slope, vidiny, passe ski na trano fandraisam-bahiny
Ahoana ny fomba hisafidianana toeram-pialam-boly?
Italiana resorts ski
Mahasoa skiing fampiharana
Tatitra Ski sy Snow (iOS sy Android) - Misy fampahalalana momba ny resorin-tsarety mihoatra ny 2000 ny eropeana, amerikana ary rosiana. Misy fifandraisana, data momba ny isan'ny fampiakarana (voamarika amin'ny sarintany ny toerana misy azy ireo). Izy io koa dia manome ny toetr'andro amin'ny antsipiriany momba ny toetrandro mandritra ny 5 andro sy ny fampahalalana momba ny lanezy nilatsaka tamin'ny faritra samihafa amin'ny lalana Fampitandremana amin'ny oram-panala.
IsKI (iOS) - Misy fampahalalana momba ny toeram-pisakafoanana ski any Amerika, Kanada ary Eropa. Toetran'ny toetr'andro. Ny hatevin'ny rakotra oram-panala. Ahafahanao manamboatra làlana eo anelanelan'ny lalana.
Mitatitra ny ski ski Liftiftia (iOS) - Misy fampahalalana momba ny fihenam-bidy amin'ny fampiantranoana ski 150, fampiofanana ski sy snowboard. Fampahalalana fanampiny momba ny toetr'andro sy ny hatevin'ny rakotra oram-panala.
Chamonix (iOS) - Misy drafitra fanaovana ski vaovao ho an'ny Chamonix. Mametraha toerana ny toerana GPS. Ahafahanao mahita ny sarin'ny Webcam an'ny resort.
Courchevel (iOS) - Sarintany mifandraika amin'ny Courchevel, miaraka amin'ny localisation GPS. Ahitana tahiry data misy ny adiresin'ny fivarotana rehetra ao an-tanàna.
2018 Ski Equipment Ratings (FreeSkier Magazine)
Nightingale - 47.29%
-dalana, - 37.43%
Bibidia mainty - 35.49%
Head - 33.85%
Ny endrika avaratra - 66.18%
Marmot - 50.47%
Kiraro mafy an-tendrombohitra - 44.84%
Helly hansen - 44.44%
Fitaovana mainty hoditra - 37.61%
goavana - 35.96%
Fikarohana ivelany - 35.26%
Dalbello - 46.77%
teknika - 43.17%
Nordica - 40.32%
Atomic - 39.27%
Nightingale - 32.87%
Fiambenana feno - 30.62%
Scarpa - 26.51%
Smith - 61.18%
kosa - 49.04%
Scott - 26.33%
Bollé - 21.95%
Pret - 16.87%
fanamarihan-toerana - 74.12%
Jereo - 52.41%
Atomic - 37.61%
Tyrolia - 35.66%
Dynafit - 31.49%
Fritschi - 11.48%
Kneebinding - 6.67%
manary - 4.06%
Hestra - 52.98%
Black Diamond - 42.91%
Ny endrika avaratra - 40.80%
Fikarohana ivelany - 32.68%
Kiraro mafy an-tendrombohitra - 32.23%
Gordini - 22.06%
Scott - 20.85%
fitobiana wagon - 19.95%
Tariby, kitapo ary kitapo
Ny endrika avaratra - 44.29%
Black Diamond - 41.82%
Famerenana amin'ny laoniny (BCA) - 30.81%
Kiraro mafy an-tendrombohitra - 30.25%
goavana - 23.69%